Qiimeyn lagu sameeyay Dalalka ugu Baasaboorka awoodda badan & kuwa liita 2021. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Qiimeyn lagu sameeyay Dalalka ugu Baasaboorka awoodda badan & kuwa liita 2021.
Qiimeyn lagu sameeyay Dalalka ugu Baasaboorka awoodda badan & kuwa liita 2021.
Qiimeynta sanadlaha ah ee lasoo saaro bilawga Janaayo ayaa lagu soo bandhigay dalalka ugu wanaagsan Baasaboorka caalamka, kuwa meelaha dhexe jooga & kuwa ugu liita, waxaana la eegayaa isticmaalka & ku safarka dadka.
Dalal dhowr ah ayaa hoos uga dhacay booska ay soo galeen sanadkii hore, waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay Xayiraadda Covid-19 oo meesha ka saartay dalxiisayaasha tegi jiray, safarrada aan dhammaadka lahayn & Diyaaradahooda oo qaadi jiray rakaab kala duwan.
Liiska Tobanka waddan ugu wanaagsan dhanka Baasaboorka sanadkaan ayaa kala ah: 1. Japan, 2. Singapore, 3. waxaa Booska saddexaad kuwa jira South Korea & Germany, 4. Kaalintaan waxaa soo galay Italy, Finland, Spain & Luxembourg, 5. Waxaa qiimeynta wada tiigsaday Denmark & Austria.
Sidoo kale Booska 6. Waxaa soo wada galay Sweden, France, Portugal, Netherlands & Ireland, 7. Switzerland, United States, United Kingdom, Norway, Belgium & New Zealand, 8. Greece, Malta, Czech Republic & Australia, waxaa sagaalaad qaanadda ku jira 9. Canada, 10. halka kaalinta ugu dambeysa ay soo gashay Dowladda Hungary.
Dalalka Booska ugu horeeya soo galay ayaa u badan waddamada aan xasilooneen & Waqooyiga Kuuriya oo ah dal ay adag tahay in loo safro, maadaama Xukuumadda Pyongyang aysan jecleen socodka badan, sabab la xiriirta in ay ka feejigan tahay basaasiin u gudubta.
Kala sareynta dalalkaan ayaa kala ah: North Korea, Libya & Nepal oo hal boos kasoo wada galay qiimeynta, Palestinian, waxaa sidoo kale isku qaanad ku jira Somalia & Yemen, Pakistan, Syria, Iraq iyo Afghanistan.
Next articleWararkii u dambeeyay kulankii Musharaxiinta iyo Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada